5 Zvirongwa zvekugadzira maGIF nekukurumidza uye nyore | Gadget nhau
Paco L Gutierrez | 16/03/2021 18:20 | Yakagadziridzwa ku 16/03/2021 22:27 | General, Software
MaGIF akange aripo kubvira nakare-kare, tinovashandisa pese patinokwanisa, ikozvino kupfuura masisitimu anoshanda eanenge ese mafoni emafoni ari kuvasanganisira pakati pekhibhodi yavo sarudzo. GIF ishoko rinoreva Graphics Kuchinjana Fomati kana muSpanish mifananidzo yekuchinjana fomati. Iyi fomati yakagadzirwa nekambani yekuNorth America yekufona, inotsigira yakakwira mazana maviri nemakumi mashanu emavara uye inoteedzana ichiburitsa akateedzana emifananidzo anogara pakati pemasekonzi mashanu kusvika gumi. Ivo havana kurira uye saizi yavo idiki kwazvo kupfuura maJPG kana maPNG mafaira.
Zvakajairika kuwana maGIFs panzvimbo peanowanzoitwa MeMes, nekuti izvi zviri kufamba uye zvinotitaurira zvinopfuura mufananidzo wemuviri. Zvakajairika kuvaona mumaforamu epamhepo kana paTwitter, kunyangwe izvozvi zvave nyore kuvaona paWhatsApp. Asi, Nei uchishandisa maGIF kubva kune vamwe isu tichigona kugadzira zvedu? Kune zvimwe zvirongwa zvinoita kuti basa iri rive nyore kwatiri. Mune ino chinyorwa tichaenda kuratidza iwo mashanu akanakisa mapurogiramu ekugadzira maGIF nekukurumidza uye nyore.
2 SSuite GIF Mhuka
5 Giphy GIF Gadzira
Almost nyanzvi yekugadzirisa mapikicha chirongwa chinoshandiswa zvakanyanya seimwe nzira yePhotoShop, iyo inogona zvakare kushandiswa kugadzira akanakisa maGIF. Pakati pehuwandu hwayo hwemabasa kugadzira maGIF, asi izvi Mifananidzo iyo yatinoda kugadzirisa ichafanirwa kunge iri muPNG fomati. Kunyangwe chirongwa ichi chakakwana, chinogona kuvhiringidza kune vanhu vasina ruzivo, nekuti sarudzo dzadzo dzakakura zvekuti zvinotyisa.
Kana isu tichida kuyedza uye kugadzira edu maGIFs pamusoro pekugadzirisa edu mapikicha sevanyanzvi vechokwadi, tinogona kurodha nekumisikidza mahara kubva papeji rayo zviri pamutemo webhusaiti. Chirongwa ichi chinowanikwa kune ese ari maviri Mahwindo nezveMacOS.
SSuite GIF Mhuka
Kana isu tiri kutsvaga yakapusa asi inoshanda chirongwa kana tichigadzira edu ane hupenyu maGIF, izvi zviri pachena kuti ndizvo zvatiri kutsvaga. Iwo mafaera atinozogadzira kubva pachirongwa ichi anoenderana neese aripo mawebhu browser uye tinogona kugoverana nekuvaona pasina dambudziko. Kuti uite izvi, zvichave zvakakwana kuwedzera iyo mifananidzo iyo yatinoda kugadzirisa nemazvo, kugadzira iyo animation nenzira kwayo. Tinogona kugadzirisa zvese paramende, kubva panguva yekuratidzira kusvika kukurumidza kwayo.
Mupepeti anotsigira mafomati eJPG, PNG, BMP uye GIF. Chinhu chakanakisa nezvechirongwa ichi ndechekuti rakareruka zvine huremu husingakoshese hwe5MB uye haridi kuiswa pamberi. Tinogona kurirodha mahara zvachose kubva papeji rako yepamutemo Webhu.
Kunyorera kwakagadzirirwa chete uye chete kwekugadzirwa kweanogadzirwa maGIF. Ichi chishandiso hachidi ruzivo rwakawanda nevapikicha vemapikicha sezvo zviri nyore kushandisa uye zvichatibvumidza kuti tigadzire maGIF edu mumatanho akapusa, tichingoisa zvifananidzo nenzira kwayo chaiyo uye kugadzirisa nguva yekuratidzira mukuda kwedu. Icho chakavhurwa sosi sosi saka yakasununguka zvachose uye haidi kuiswa kwekutanga.
Iko kunyorera kunogona kushandiswa kubva peni yekutyaira kana yekunze hard disk sezvo isingade kuiswa muhurongwa hwekushandisa. Inotsigira mafomati mazhinji anosanganisira PNG, JPG, BMP uye GIF. Kunyangwe isingade kuiswa, isu tinofanirwa kuve neJava yakavandudzwa muchikwata chedu. Yayo interface iripfupi asi yakapusa uye yekukwirisa nguva yakati rebei, asi mhedzisiro inotarisirwa. Kana iwe uchida kuyedza iyi application unogona kuikanda kubva ku webhusaiti yemusiki.
Imwe yeakanakisa suite yekugadzirisa mifananidzo. Iko kunyorera kwakatakurwa nesarudzo dzekugadzirisa mifananidzo, asi zvakare sarudzo dzekugadzira maGIF edu. Isu tinowana kuwanda kwesarudzo dzakarongedzwa izvo zvinotibvumidza isu kugadzirisa zvirinyore uye kugadzirisa mapikicha edu. Kugadzira maGIF isu tinongofanirwa kushandisa akati wandei mapikicha kugadzira iyo yakajeka mifananidzo. Chirongwa ichi chakanyatsojeka uye chiri nyore kushandisa, asi sekufanana neGIFtedMotion, inononoka uye inorema painogadziriswa, kunyangwe mhedzisiro yacho ichikosha, pane inokurumidza.
Chirongwa ichi chakasununguka zvachose sezvakaitwa zvekare uye tinokwanisa kuchikanda pasina kunyoreswa kwepamberi kubva papeji rayo yepamutemo Webhu.
Giphy GIF Gadzira
Chekupedzisira, chirongwa chinomira kunze kwekureruka kwekushandisa uye nehukama hwayo interface. Nayo tinogona kugadzira animated maGIF emahara mumaminetsi mashoma. Izvo zvinogona kuvandudzwa kubva mukuteedzana kwemifananidzo yakatorwa kubva kune saiti kana kubva kune yako wega gallery. Kunyangwe isu zvakare tine sarudzo yekugadzira maGIF kubva kumavhidhiyo kungave kwedu gallery kana kubva kuYouTube kana mamwe mavhidhiyo ekushandisa. Pasina mubvunzo chikumbiro chinopa yakawanda yekutamba kana tichigadzira edu emifananidzo mifananidzo yekushandisa chero kupi.
Chinhu chakanakisa nezve chishandiso ichi ndechekuti ndeye Webhu kunyorera saka hatidi chero kuiswa kwekutanga, ingoisa yako zviri pamutemo webhusaiti uye shandisa imwe yemabasa ayo akasiyana-siyana ainopa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » 5 Zvirongwa zvekugadzira maGIF nekukurumidza uye nyore
FreeBuds 4i: Huawei inodzokera kuhunhu / kiyi yemutengo